Dadka cudurka kansarka u xanuunsada oo laba-laabmi doona - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jan Zedenius, chefsläkare. sawir: Cancerfonden/TT
Dadka cudurka kansarka u xanuunsada oo laba-laabmi doona
La daabacay onsdag 6 april 2016 kl 10.23
Tirada qof ee ku xanuunsada cudurka kansarka ayaa labalaabmi doona marku sannadku yahay 2040. Sidaas waxaa sheegay cilmi baadhiis cusub oo uu ururka cancerfonden shaaciyay.
Baadhitaankan ayaa isaguna sheegay in kharashska ka baxaya waddanka si dadkan loo daweeyo labalaabmi doono.
Jan Zedenius oo dhakhtar ah ayaa u jeeda in u arrinkani culeeys badan saari doono cusbitaalada waddanka.
-Waxaa sii atkaanaysa in aanu dadkan wada haleelno iyo in ay saameeyn ku yeelan doonto caawimaadii aanu siin jirnay dadka u baahan in ay noloshoodi caadiga ahaa ku soo laabtaan, waxaa af Iswiidhiska lugu yidhaahdo rehabilitering, ayuu sheegay.
Ururka Cancerfonden ayaa rajeenaya in lacag dheeraad ah lugu maalgeliyo cilmibaadhis nocan oo kale ah.
Waxey dhaleecayn xoog leh u gudbinayan habka dadkan loo daryeelo iyo maamulada gobolada ee caafimaadka.
-Maanta waxaa waddanka ka jira 21 maamul oo dhamaantood hab kala duwan u shaqeeya. Waxaa fiicnaan laheeyd hadii tirada maamuladan la yareeyn lahaa, madama ay badanyihiin maanta, daryeelka caafimaad ee dadkan la siiyo ayaa ku xidhan halkey waddanka ka degan yihiin. Sidaas waxaa sheegay Jan Zedenius.